Burmese - Insworld Institute
2022 အတွက် အတန်းအသစ်ဖွင့်ပြီနော်။
Insworld Institute သည် International ကျောင်းသူ/သား တွေ တက်တဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ Singapore က Private School ဖြစ်ပါသည်။ Insworld ဟာဆိုရင် ဗြိတိန်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် IGCSE နှင့် International A-Level စာမေးပွဲတွေ ဖြေဆိုရန် နှင့် နိုင်ငံတကာကျောင်းများကို တတ်ရောက်လိုသော ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် အကောင်းဆုံး လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေသောကျောင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Why Choose Insworld Institute?
Insworld Institute မှ သင်တန်းအောင်မြင်သော ကျောင်းသူ/သားများ၏ အရည်အချင်းကို နာမည်ကြီး နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေ ဖြစ်တဲ့ University of Oxford, Imperial College London, Trinity College Dublin, National University of Singapore and တခြားသော နာမည်ကြီး တက္ကသိုလ်ကြီးကလည်း အသိအမှတ်ပြုပါသည်။
စာသင်ခန်းတွေဟာဆိုရင် စာသင်ခန်းအသေး4ယောက်ကနေ 12ယောက်အထိ စာသင်ခန်းပုံစံဖွဲ့ပေးထားတယ်။ ကျောင်းသားတွေ စာသင်ကြားရေးပိုင်းမှာ အခက်အခဲရှိခဲ့လျှင် တစ်ချင်းစီ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက် သေချာ ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီနဲ့ ညှိနိုင်ပေးပါတယ်။
International Students inaMulti-Cultural City
International Students တွေဟာ နိုင်ငံတကာ နှင့် နိုင်ငံပေါင်း ၄၅ နိုင်ငံ ကွဲပြားတဲ့ ကျောင်းသူ/သားတွေ စုစည်းထားတဲ့ကျောင်းဖြစ်ပါသည်။ စင်ကာပူမှာ ဖွင့်လှစ်ထားသည့်အတွက် ယဉ်ကျေးမှုမျိုးစုံ လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ အတူတကွ နေထိုင်ကြတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အတွေ့အကြုံကို တွေ့ရပီး စင်ကာပူရဲ့ နေရာတိုင်မှာ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကို ဦးစားပေးထားတာကို တွေ့မြင် ခံစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေဟာ Insworld Institute မှ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေကို တခြားသူတွေထပ် ပိုကောင်းတဲ့ နားလည်ပေးမှု သည်းခံမှုကို လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ သင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Flexible Enrolments and Examinations
Insworld operatesamodular four-term year, which means that students can join our programmes at different times of the year (January, March, July and September). Typically, IGCSE and A-Level programmes can be completed in six terms (18 months). This enables significant savings in terms of time and cost.
A level သင်တန်းတွေဟာဆိုရင် ဆေးကျောင်းတက်မယ့် ကျောင်းသားတွေအတွက် အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်ပေးတယ်။ ကျောင်းသားတွေဟာ နာမည်ကြီးတဲ့ တက္ကသိုလ် တွေကို တတ်ရောက်ခွင့်ရတဲ့ အခါ Insworld ဟာ အမြဲငါတို့ကျောင်းသူ/သားတွေအတွက် ဂုဏ်ယူနေရတယ်။
One-To-One Academic Support For Students
ကျောင်းသားတိုင်းရဲ့ တစ်ဦးချင်းစီ တိုးတတ်မှုကို Personal Tutor က အမြဲစောင့်ကြည့်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်လာလျှင် ပညာရေးဆိုင်ရာအကူအညီ အထောက်အပံ့ အနေနဲ့ Extra one to one tuition sessions ကိုစီစဉ်ပေးတယ်။ ပညာရေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့က အပိုပေးစရာမလိုပဲ ကျောင်းသားကို လိုအပ်ပါက အချိန်ပို ကျူရှင်စီစဉ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ Weekly and termly report တွေ Formal Assessment Grade တွေနှင့် ကျောင်းသားမိဘ တစ်ဦးချင်းစီတိုင်း၏ တိုးတတ်မှု ကို မိဘများအား အမြဲ စဉ်ဆက်မပြတ် အသိပေးတင်ပြ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပညာရေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များအပြင် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု အားကစား ဖြစ်တဲ့ Basketball, badminton, dace, futsal and taekwondo တို့ကိုပါ အတူတကွသင်ယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် လူမှုရေးတာဝန် နှင့် အသိပညာမြှင့်တင်ရန် လှုပ်ရှားမှုများကိုပါ ကျောင်းသားတွေအတွက် ထည့်သွင်း စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
"My journey in Insworld has been very fruitful. Insworld has equipped me with the knowledge and skills to pursue my desired course."
Seth Teoh, Singapore
(International A-Level, 2016)
Highest Mark in the World for International A-Level Biology
Studying Medicine at Trinity College Dublin, Ireland
"Insworld’s caring and eager teachers ensure that students are able to comprehend and grasp the subjects by giving each student personal attention."
Ammar Haider Manasawala, Singapore
Studying Medicine, University of Otago, New Zealand
"Insworld Institute has definitely beenalife changing experience for me. It helped change my outlook in life and made me realize the importance of education, having discipline and making wise decisions in life."
Yiwei Liew, Singapore
(International A-Level, 2015)
Highest Mark in Singapore for International A-Level Economics
Studying Economics at University College London, United Kingdom
"Insworld isaschool that helped me mature as an individual and enabled me to reach my full potential."
Amreena Shamit Binti Mohamed Asraf Nazem, Singapore
(GCE A-Level, 2014)
Highest Mark in the World for GCE A-Level Psychology
Highest Mark in the Singapore for International A-Level Mathematics
Highest Mark in the Singapore for International A-Level Chemistry
Studying Medicine, Trinity College Dublin, Ireland
Students may join Insworld for EITP, International GCSE or A-Level courses, depending on their prior academic achievement and English Language ability. The English for Academic Study programme exists to help students reach the required English Language level before they join an Insworld academic programme.
International ကျောင်းသူ/သားများ အတွက် နိုင်ငံခြား တက္ကသိုလ်များသို့ အောင်မြင်စွာ အရောက်လှမ်းနိုင်ရန် Insworld Institute ကို စာရင်းသွင်း တတ်ရောက်လို့ရပါပီနော်။
Parent Student Guardian Agent Others
International Advanced Level (IAL) International General Certificate of Education (IGCSE) Edexcel International Tuition Programme (EITP) English for Academic Study (EAS)